Nzira yekuvhura IPSW faira pane Mac | IPhone nhau
Kugadziridza kana kudzoreredza iyo iPhone, iPod kana iPad zviri nyore kwazvo, kunyanya kana isu tatozviita kamwe chete. Tinogona kudzoreredza kubva pachigadzirwa (Zvirongwa / Zvizhinji / Dzorerazve / Kudzima zvirimo uye marongero. Asi, chenjera, usazviita zvakadaro kuti uchengetedze jeri) kana kubva kuTunes, nekungodzvanya pa "Dzosera iPhone". Asi kana iyo vhezheni yatinoda kuisa ichiri kusainwa, pane yechitatu sarudzo, inova yekuodha pasi iyo .ipsw faira uye riise naro pamurume.
Maitiro acho ari nyore, asi kune vanhu vazhinji vasingazvizive uye iwe watizivisa iwe mumibvunzo yako. Mubvunzo ndiwo mubvunzo une chinyorwa ichi semusoro waro: ¿Kuvhura sei faira .ipsw paMac? Tevere isu tinokuudza iwe kwete chete kuti ungavhura sei paMac, asi zvakare paWindows makomputa.
Chekutanga chichava, chokwadika, tora iyo faira pamwe nekuwedzera .ipsw (iPhone Software) yeyedu kifaa. Rakanakisa peji uye iyo yandinokurudzira iri nyore kuyeuka: getios.com. Pane imwe nguva mu getios.com, tichaona matatu anodonhedza mabhokisi umo isu ticharatidza kuti ndeupi rudzi rwechigadzirwa chatinoda kurodha pasi firmware kubva, ndeipi modhi uye ndeipi vhezheni yeIOS, sezvaungaona mune inotevera skrini.
Kana tangosarudzwa, zvese zvatinofanirwa kuita tinya pane tsvuku museve icon pazasi pezvinyorwa «Dhawunirodha». Mu getios.com ivo vanowanzo dhawunirodha mafaera asina kuvharwa, asi online zvinogona kuti uchavawana mukati me .zip kana .dmg. Kunyangwe ichiita senge yakapusa, ndizvo yakakosha kusunungura iyo faira kana, zvine musoro, hatizokwanisa kuwana iyo .ipsw faira.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, isu tichafanirwa kudaro vhura iyo faira ne iTunes. Kuti tiite izvi, isu tichazongofanira tinya ALT kiyi paMac kana Shift paWindows uye tinya "Dzoserai iPhone" kana "Gadziridza", zvinoenderana nezvatinoda kuita. Nekudzvanya kiyi usati wadzvanya, zvatiri kutaura kuvhura hwindo uko kwatinozotsvaga iyo .ipsw faira nemaoko. Kana tangoita, iTunes ichabatana neApple maseva, ita maitiro ayo, uye wotanga kuisirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nzira yekuvhura IPSW faira pane Mac
Twist chirongwa cheMicrosoft chitsva chekutora mifananidzo zvakare pa iPhone
iFixit inovhuvhuta iyo nyowani Magic Mouse, Mashiripiti Trackpad uye Mashiripiti Keyboard